Ikhaya eliselula kumasango ePerche
Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguPhilippe
Indawo yam yokuhlala ikufuphi nehlathi lesizwe laseSenonches, ibekwe entliziyweni yepaki yengingqi yasePerche, 1h30 ukusuka eParis kunye nemizuzu engama-40 ukusuka eChartres. Uyakuxabisa indawo yam yokuhlala emoyeni, izithuba zangaphandle, ubumelwane, ukukhanya, ukunyuka entliziyweni yehlathi lesizwe laseSenonches. Fumana iPerche kunye nezinto ezininzi ezikhangayo zabakhenkethi, tyelela ilali ebukekayo yaseSenonches, ilifa layo elicebileyo elakhiweyo, inqaba yayo, imyuziyam yayo, amachibi ayo.
Sibekwe embindini welinye lawona mahlathi makhulu karhulumente, sizolile ngokupheleleyo.
4.69 ·Izimvo eziyi-170
4.69 out of 5 stars from 170 reviews
4.69 · Izimvo eziyi-170
ISononches sisixeko esincinci esinabemi abangama-3000 esinomtsalane, esibhalwe isikhululo esiluhlaza, isixeko esilungele ukutshaja iibhetri zakho, ukuphumla kwaye ukonwabela impelaveki engaqhelekanga.
Yethu ihlathi elikhulu nokuhomba Domaniale of Senonches ivumela sibethwe emangalisayo ngenyawo apho uya kufumanisa imithi umangalisayo, uya masifundise kangangoko mushroom ukukha, ukuba kokufunyanwa enezityalo nezilwanyana ohlukahlukeneyo kakhulu ... uvuyo zehlathi kukho .... 5 imizuzu ukusuka kwi-bungalow
Kwabathanda ukuloba, kukho amachibi amaninzi, ekugqibeleni i-GR 35 idlula kufuphi ne-bungalow.
Sinazo zonke iinkcukacha eziluncedo kubahambi (uhambo, iminyhadala, iimarike zentakumba, iikonsathi, njl.) kwaye sabelane ngayo ngolonwabo olukhulu.
Yethu ihlathi elikhulu nokuhomba Domaniale of Senonches ivumela sibethwe emangalisayo ngenyawo apho uya kufumanisa imithi umangalisayo, uya masifundise kangangoko mushroom ukukha,…